Bale oo ku wargeliyay kooxda Real Madrid go’aankiisa kama dambeysta ah, kahor suuqa xagaaga – Gool FM
(Spain) 20 Abriil 2019. Xidiga kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa u sheegay maamulka Los Blancos go’aankiisa kama dambeysta ah ee ku aadan inuu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu iyo inkale, suuqa xagaaga ee soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeysyada gudaha Spain Gareth Bale ayaa u sheegay Real Madrid inuu qorsheynayo inuu sii joogo garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda.
Wakiilka Bale ee Jonathan Barnett ayaa ku war galiyay maamulka Real Madrid go’aanka kama dambeysta ah ee xidiga reer Weles, wuxuuna u xaqiijiyay in xidiga reer Weles uusan dooneynin inuu ka dhaqaaqo kooxda suuqa xagaaga ee soo socda.
Si kastaba Gareth Bale ayaa wuxuu dalabyo dhowr ah ka helayaa kooxaha reer England si uu markale ugu laabto horyaalka Premier League, iyadoo ay Manchester United tahay kooxda ugu cad cad ee dooneysa saxiixiisa.
“Liverpool waxay heysataa weeraryahano banaanka soo dhigay awoodooda ciyaareed” - Valverde